San Htun's Diary: Before & After
Spring & Hybernate သင်တဲ့ ဆရာ Michael က ကျောင်းမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ပရော်ဖက်ဆာ။ နယ်သာလန် (ဟော်လန်) က။ ဟော်လန်ဆိုတာနဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲတွေမှာ လိမ္မော်ရောင်တောက်တောက် ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အသင်းလို့အမှတ်ရပါတယ်။ ဆရာ့ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ချောတယ်လို့ကျောင်းသူအားလုံးက တညီတညွှတ်တည်း မှတ်ချက်ပြုပါတယ် (၄ ယောက်တည်းသော ကျောင်းသူတွေက)။ အသက်ကလည်း ၃၀ တောင် ပြည့်သေးရဲ့ လားမသိ။ တော်လည်း တော်ပါတယ်။
နူးညံ့ ညင်သာတဲ့ လေသံလေးနဲ့မျက်နှာပေါ် ဝဲကျနေတဲ့ ဆံပင်လေးကို သပ်တင်လိုက်ရင် မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းနက်နက်လေးကို အနားသတ်ပေးထားတဲ့ မျက်ခုံးထူထူတွေကို မြင်ရလေတိုင်း ငါသာ သူ့ လို မျက်ခုံး၊ မျက်လုံးလှလို့ ကတော့ ဖုံးမထားဘူး ဖေါ်ထားမှာလို့တွေးမိပါတယ်။ အရပ်က သာမန်၊ လူကောင်က သေးပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ့် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ပုံ ပေါက်ပါတယ်။
ဆရာ Najeeb လောက် စာသင်မကောင်းပေမဲ့ တပည့်တွေကို စိတ်ပါလက်ပါ စေတနာအပြည့်နဲ့ သင်မှန်း သိသာပါတယ်။ ကျောင်းသားတဦးရဲ့အိမ်စာတွေကို အသေအချာဖတ်ပြီး အကြံပေးတာတွေ၊ မှတ်ချက်တွေ ပေးတတ်ပါတယ်။ နားမလည်လို့ သွားမေးလို့ ကတော့ နားလည်အောင် ထပ်ကာထပ်ကာ မမောနိုင်မပန်းနိုင် ရှင်းပြတတ်ပါတယ်။ မနက်တိုင်းဖြေရတဲ့ Quizzအဖြေလွှာစာရွှက်တွေကိုလည်း အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်တွေနဲ့အမှတ်ပေးတတ်ပြီး သူကြိုက်တဲ့ အချက်လေးတွေဆို မှတ်မှတ်ရရ တေးတတ်ပြန်တယ်။ ၃ နာရီ အတန်းပြီးသွားပေမဲ့ အခန်းထဲမှာ ၅နာရီအထိ ရှိနေပြီး ကျောင်းသားတွေ မေးတာကို ဖြေဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ကျောင်းသားရဲ့နာမည်၊ ခုံနံပါတ်ပါတဲ့ မေးခွန်း၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြေရတဲ့ မေးခွန်းဆိုရင်လည်း အဖြေကို နံပါတ်ပါတဲ့ thumb drive ထဲ ထည့်ပေးရပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေက မှတ်ချက်ပြုပါတယ် လုပ်လည်းလုပ်နိုင်တဲ့ ဆရာတဲ့။
ပရိုဂရမ်းမင်း ဘာသာရပ်ဆိုတာလည်း ပုစ္ဆာတခုကို အဖြေက အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ တခြားဆရာတွေကတော့ ဘယ်နည်းနဲ့တွက်တွက် အဖြေထွက်ရင် ပြီးရော လက်ခံပေမဲ့ ဆရာကတော့ သူနဲ့လုံးဝတူမှ အမှတ်ပြည့်ပေးချင်တာပါ။ အမှတ်ပေးလည်း ကပ်စီးနည်းတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ့ မေးခွန်းကလည်း အရမ်းခက်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်။ ၁၀နာရီကနေ ဖြေလိုက်တာ နေ့ လည် ၂ နာရီသာထိုးရော အရမ်းတော်တဲ့၊ အတွေ့ အကြုံအရမ်းများတဲ့ ကျောင်းသားလောက်သာ error ရှာတွေ့ ပြီး application ကို run နိုင်တာပါ။ နေ့ လည်စာလွတ်ရုံမက ၄နာရီထိုင်ဖြေပေမဲ့ အဖြေမတွေ့ တော့ ကျောင်းသားတွေ မှတ်ချက်ပြုပုံက
“Before the exam, Michael is handsome. After the exam, he is not handsome anymore.” ဟူ၍။
သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၁။
I also like that befor the exam prof is handsome after the exam he is not any more.
တို့တွေဆီကို ယူအက်စ်က ကိုရီးယားဆရာတစ်ယောက်တနှစ်လာသင်တယ်ဟယ်။
ဟိဟိ သူစာသင်လို့ လက်တိုဝတ်တဲ့နေများ တို့တွေ နေစရာမရှိဘူး ခုံအောက်ကနေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လက်တွေကုတ်ကြတာ ..
ဆရာမသဘောမကောင်းတာနဲ့ သင်ရတုန်းကတော့ ကျလိုက်တာ တဖုန်းဖုန်း။ ဆရာမကိုလည်း မျက်နှာထားတင်းတယ်လို့ ထင်တယ်။ သူ့ အတန်းလည်း အောင်ပြီးသွားရော ဆရာမ ကချောပြီး မျက်နှာထားတင်းတယ်လို့ သိပ်မထင်တော့ဘူး။း)
စေတနာတော်တော်ထားတဲ့ဆရာပဲ။ ကျွန်မလည်း အဲလို ဆရာမျိုးတွေတွေ့ဖူးတယ်။ တကယ်ကို လေးစားမိတယ်။ ကိုယ်က အမြဲတန်း အနောက်ဆုံးမှာချန်ပြီး စာမေးနေကျဆိုတော့ စေတနာထားတဲ့ ဆရာမှပဲ အဆင်ပြေတယ်။ အတုယူသင့်တဲ့ ဆရာပါပဲ။
That's why we need ratemyprofessors.com
အမြဲတမ်းသဘောကောင်းတဲ့ ဆရာ ဆရာမကိုပဲ
before & after ခြားနားချက်ကလေးကကို ရီရီမောမော
အားရလိုက်တာ...ဒါမှ ဆရာလို့ ခေါ်တာပေါ့...ဦးဟန်ကြည်တို့ တိုင်းပြည်က ဆရာတွေကိုလည်း အဲဒီလိုဆရာမျိုး ဖြစ်စေချင်လိုက်တာလေ...လောလောဆယ်တော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဇွတ်အတင်းကြိုးစားနေတာတောင် အဲဒီဆရာလောက် စိတ်မရှည်၊ သဘောမကောင်းနိုင်သေးပဲ ဖြစ်နေသေးတယ်...ဒါပေမယ့် အမှတ်ပေး ကပ်စေးနှဲတာတော့ သွားတူပြန်ရော...
ကျောင်းသားဘဝမှာ ဆရာက အဓိက ကျတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲ စန်းထွန်းရေ...လွမ်းထှာနော် ..ကျောင်းသားဘဝကိုတောင် ပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်ချင်သား... :(
ဆရာမိုက်ကယ်ကလဲ အခုလိုလေး မှတ်ချက်ပေးတယ် ဆိုဘဲ။ :D
Before the exam, students are ugly. After the exam, the students are not in beauty. :D :D :D
အတော်နောက်တဲ့ ကျောင်းသူတွေ။ နှာ့လိုဘဲ။း))
ဟုတ်ပါ့... Hibernate မှ အမှန်...အမှန်ပြင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်...
ဘလော့ဒေး (တဂ်ပို့ စ်)
The day after NDP is ...
တကယ် တတ်မတတ် _ ၂
တကယ် တတ်မတတ် _ ၁